Izicwangciso ze-SEO: Ungalifumana njani inqanaba leShishini lakho kuPhando lwe-Organic ngo-2022? | Martech Zone
Izicwangciso ze-SEO: Ungalifumana njani inqanaba leShishini lakho kuPhando lwe-Organic ngo-2022?
NgoMvulo, Matshi 28, 2022 NgoMvulo, Matshi 28, 2022 Douglas Karr
Sisebenza nomxhasi ngoku oneshishini elitsha, uphawu olutsha, isizinda esitsha, kunye newebhusayithi entsha ye-ecommerce kushishino olukhuphisana kakhulu. Ukuba uyayiqonda indlela abathengi kunye neenjini zokukhangela ezisebenza ngayo, uyaqonda ukuba oku akuyona intaba elula ukunyuka. Iimpawu kunye nemimandla enembali ende yegunya kumagama angundoqo athile anexesha elilula kakhulu lokugcina kunye nokukhulisa umgangatho wabo wezinto eziphilayo.
Ukuqonda i-SEO ngo-2022
Enye yeencoko eziphambili endiba nazo neenkampani xa ndichaza usetyenziso lwe-injini yokukhangela (seo) namhlanje yindlela etshintshileyo ngayo ishishini. Injongo yazo zonke iziphumo zenjini yokukhangela kukubonelela ngoluhlu lwezixhobo kwiphepha lesiphumo senjini yokukhangela (SERP) eya kuba yeyona ilungileyo kumsebenzisi we-injini yokukhangela.
Kumashumi eminyaka eyadlulayo, i-algorithms yayilula. Iziphumo zophendlo bezisekelwe kumakhonkco... qokelela amakhonkco amaninzi kwindawo yakho okanye iphepha kwaye iphepha lakho libekwe kakuhle. Ewe, ekuhambeni kwexesha, ishishini ladlala le nkqubo. Ezinye iinkampani ze-SEO zide zakhiwe ngokucwangcisiweyo ikhonkco ifama ukunyusa ngobuchule ukubonakala kwe-injini yokukhangela kubathengi babo abahlawulayo.
Ii-injini zokukhangela kuye kwafuneka zilungelelanise… zineendawo kunye namaphepha abekwe ngokwenqanaba angenamsebenzi kumsebenzisi we-injini yokukhangela. I amaphepha angcono azizange zibekwe ngokwezikhundla, yayiziinkampani ezineepokotho ezinzulu okanye ezona zicwangciso ziphambili zokubuyela umva. Ngamanye amazwi, umgangatho weziphumo zenjini yokukhangela ubusehla… ngokukhawuleza.
Ii-algorithms ze-injini yokukhangela ziphendule kwaye uthotho lweenguqu zashukumisa ishishini kwisiseko salo. Ngelo xesha, ndandicebisa abathengi bam ukuba balahle ezi zicwangciso. Enye inkampani eyayisiya esidlangalaleni yade yandiqesha ukuba ndenze uphicotho-zincwadi lwe-backlinks oluveliswe ngenkqubo yokufikelela kumcebisi we-SEO. Kwiiveki nje ezimbalwa, ndakwazi ukulandela umkhondo Qhagamshela iifama ukuba umcebisi wayevelisa (ngokuchasene nemigaqo ye-injini yokukhangela yeenkonzo) kunye nokubeka i-domain emngciphekweni omkhulu wokungcwatywa ekufuneni, umthombo oyintloko we-traffic yabo. Abacebisi bagxothiwe, thina waqhawula amakhonkco, kwaye siyisindise inkampani ekungeneni kuyo nayiphi na ingxaki.
Kuyamangalisa kum ukuba nayiphi na i-arhente ye-SEO ikholelwa ukuba ngandlel 'ithile ikrelekrele ngaphezu kwamakhulu eenzululwazi zedatha kunye neenjineli ezisemgangathweni ezisebenza ixesha elizeleyo kuGoogle (okanye ezinye iinjini zokukhangela). Nantsi isiseko esisisiseko se-algorithm ye-organic ranking kaGoogle:
Iphepha elikwinqanaba eliphezulu kwisiphumo sokukhangela kuGoogle libekwe apho ngokuba sesona sixhobo sibalaseleyo somsebenzisi we-injini yokukhangela, hayi ngokudlala ialgorithm yokunxibelelana ngasemva.
Amanqaku aphezulu kuGoogle ka2022
Apho abacebisi be-SEO kwiminyaka eyadlulayo babenokugxila kwi-site kunye nemiba yobugcisa bewebhusayithi kunye ne-off-site ene-backlinks, ukukwazi kwanamhlanje ukubeka umgangatho kufuna ukuqonda okupheleleyo komsebenzisi we-injini yokukhangela kunye amava ukuba ubanike xa bekhetha indawo yakho kwiziphumo zenjini yokukhangela. Le infographic evela Uyilo lweWebhusayithi ebomvu wenza umsebenzi omangalisayo wokubandakanya i izinto eziphezulu zokubeka ngokusebenzisa Injini Yophando kwezi zinto zibalulekileyo:
Ukupapasha umxholo okumgangatho ophezulu – Xa sisebenza ekuvavanyeni nasekuphuhliseni a ilayibrari yomxholo kubafaki bethu, sisebenza ekuveliseni owona mxholo ubalaseleyo xa kuthelekiswa neziza ezikhuphisanayo. Oko kuthetha ukuba senza itoni yophando ukuvelisa iphepha elibanzi, elakhiwe kakuhle elinika iindwendwe zethu yonke into abayifunayo - kubandakanywa ukusebenzisana, isicatshulwa, iaudio, ividiyo kunye nomxholo obonakalayo.
Yenza indawo yakho iMobile-Eyokuqala -Ukuba ugrumba nzulu kuhlalutyo lwakho, uya kufumanisa ukuba abasebenzisi beselula bahlala bengowona mthombo we-injini yokukhangela i-organic traffic. Ndiphambi kweeyure zedesktop yam ngosuku ndisebenza… kodwa ndikwanguye umsebenzisi osebenzayo wenjini yokukhangela njengoko ndiphandle edolophini, ndibukele inkqubo yeTV, okanye ndihleli nje ikofu yam yasekuseni ebhedini.
Phucula amava akho oMsebenzisi - Iinkampani ezininzi kakhulu zifuna a hlaziya kwakhona kwindawo yabo ngaphandle kophando olwaneleyo malunga nokuba bayayifuna na. Ezinye zezona sayithi zibalaseleyo zinesakhiwo esilula sephepha, izinto eziqhelekileyo zokukhangela, kunye noyilo olusisiseko. Amava awohlukileyo ayingowona mava angcono… nikela ingqalelo kwiintsingiselo zoyilo kunye neemfuno zabasebenzisi bakho.
Uyilo lweSiza -Iphepha lewebhu elisisiseko namhlanje linezinto ezininzi ezibonakalayo kwiinjini zokukhangela kumashumi eminyaka eyadlulayo. I-HTML iye yaqhubela phambili kwaye inezinto eziphambili kunye nesibini, iindidi zamanqaku, izinto zokuhamba, njl. Ndiyifanisa nokuqengqeleka kwekhaphethi ebomvu… kutheni ungayenzi?
IiVithamini zeWebhu ezingundoqo - IiVithamini zeWebhu ezingundoqo zisisiseko esibalulekileyo sehlabathi lokwenyani, iimetrics ezigxile kumsebenzisi ezilinganisa imiba ephambili yamava omsebenzisi wewebhusayithi. Ngelixa umxholo omkhulu unokubekwa kakuhle kwiinjini zokukhangela, umxholo omkhulu ogqithisa ulindelo kwiimethrikhi zeCore Web Vitals kuya kuba nzima ukukhupha iziphumo eziphezulu.
IiWebhsayithi ezikhuselekileyo -Iiwebhusayithi ezininzi ziyasebenzisana, okuthetha ukuba ungenisa idatha kwaye ufumane umxholo kubo… njengefomu yokubhalisa elula. Indawo ekhuselekileyo ichazwa yi HTTPS udibaniso kunye nomaleko okhuselekileyo weziseko (SSL) isatifikethi esibonisa ukuba yonke idatha ethunyelwe phakathi komtyeleli wakho kunye nesayithi iguqulelwe ngokuntsonkothileyo ukuze ingabanjwa lula ngabageki kunye nezinye izixhobo zokujonga inethiwekhi. A iwebhusayithi ekhuselekileyo iyimfuneko kule mihla, akukho ngaphandle.
Yandisa isantya sephepha -Iinkqubo zanamhlanje zolawulo lomxholo ziiplatifti eziqhutywa kwisiseko sedatha ezijonga phezulu, zibuyise, kwaye zibonise umxholo wakho kubasebenzisi. Kukho itoni ye izinto ezichaphazela isantya sephepha lakho – yonke loo nto inokwandiswa. Abasebenzisi abandwendwela iphepha lewebhu elikhawulezayo badla ngokungagqabhuki kwaye baphume… ke ii-injini zokukhangela zinika ingqwalasela enkulu kwisantya sephepha (I-Core Web Vitals ijolisa kancinci ekusebenzeni kwendawo yakho).
Ukulungiswa kwephepha -Indlela iphepha lakho elilungelelaniswe ngayo, lakhiwe, kwaye linikezelwe kwi-injini yokukhangela i-crawler inceda i-injini yokukhangela ukuba iqonde ukuba yintoni umxholo kunye namagama angundoqo ekufuneka afakwe kuyo. Oku kunokubandakanya iithegi zakho zesihloko, izihloko, amagama abhalwe ngqindilili, umxholo ogxininisiweyo, idatha yemeta, iziqwengana ezityebileyo, njl.
Metadata -I-Meta deta lulwazi olungabonakaliyo kumsebenzisi obonakalayo wephepha lewebhu kodwa oko kwakhiwe ngendlela enokuthi isetyenziswe lula ngumkhangeli we-injini yokukhangela. Uninzi lwamaqonga olawulo lomxholo kunye neeplatifti ze-ecommerce zineenkalo zedatha yemeta ozikhethelayo onokuthi uzisebenzise ngokupheleleyo ukufumana isalathiso somxholo wakho ngokuchanekileyo.
I-Schema -I-Schema yindlela yokumisa kunye nokubonisa idatha ngaphakathi kwendawo yakho apho ii-injini zokukhangela zinokuzisebenzisa ngokulula. Iphepha lemveliso kwiphepha le-e-commerce, umzekelo, linokuba nolwazi lwexabiso, iinkcazo, ukubalwa kwe-inventri, kunye nolunye ulwazi oluya kuboniswa ziinjini zokukhangela eziphuculwe kakhulu. oonomadudwane abatyebileyo kumaphepha eziphumo zenjini yokukhangela.
Unxibelelwano lwangaphakathi -Ulawulo lwendawo yakho kunye nokuhamba kumela ukubaluleka komxholo kwindawo yakho. Zifanele zilungiselelwe zombini kumsebenzisi wakho kwaye zibonise kwiinjini zokukhangela ukuba ngawaphi amaphepha abaluleke kakhulu kumxholo wakho kunye namava omsebenzisi.
I-Backlinks efanelekileyo kunye neGunyaziwe -Unxibelelwano kwindawo yakho ukusuka kwiindawo zangaphandle zisabalulekile ekubekweni kwinqanaba, kodwa kufuneka kucwangciswe ngobuchule ukuba unqwenela ukukhawulezisa isikhundla sakho. Ukufikelela kwiiBlogger, umzekelo, kunokubonelela ngeesayithi ezifanelekileyo kwishishini lakho ezinenqanaba eliphezulu elinomxholo obandakanya ikhonkco kwiphepha lakho okanye isizinda. Nangona kunjalo, kufuneka ifunyanwe ngomxholo omkhulu… ayityhalelwa ngogaxekile, urhwebo, okanye izikimu ezihlawulelwayo zonxulumaniso. Indlela enkulu yokuvelisa i-backlinks efanelekileyo kakhulu kwaye egunyazisiweyo kukuvelisa enkulu Isitishi sikaYouTube esilungiselelweyo. Eyona ndlela ilungileyo yokufumana amakhonkco kukuvelisa kunye nokwabelana nge-infographic emangalisayo… njengoYilo lweWebhusayithi eBomvu lwenzile apha ngezantsi.
Uphendlo lwaseKhaya - Ukuba indawo yakho imele inkonzo yendawo, ibandakanya izibonakaliso zendawo ezifana neekhowudi zendawo, iidilesi, iimpawu zomhlaba, amagama eedolophu, njl. Kananjalo, ishishini lakho kufuneka libandakanye iShishini likaGoogle kunye nezinye iirejista ezithembekileyo. Ishishini likaGoogle liya kuqinisekisa ukubonakala kwimephu ehambelana nayo (ekwabizwa ngokuba yi ipakethe yemephu), ezinye izikhokelo ziya kuqinisekisa ukuchaneka kweshishini lakho lendawo.
Yhuu… yinto encinci leyo. Kwaye inika ulwazi oluncinci malunga nokuba kutheni umcebisi wetekhnoloji yokukhangela emsulwa akonelanga. Umgangatho wophendlo lwanamhlanje ufuna ulungelelwaniso lobuchule bomxholo, itekhnoloji, umhlalutyi, umthengisi wedijithali, ingcali yobudlelwane boluntu, umyili wewebhu… nayo yonke into ephakathi. Ungasathethi ke ukuba uzakuzibandakanya njani neendwendwe nini bafika - ukusuka ekubanjweni kwedatha, ukulinganisa, unxibelelwano lokuthengisa, uhambo lwedijithali, njl.
tags: Ukufikelela kwibloggerIimpawu eziphambili zewebhuuphandoIshishini kugoogleIzinto ezikwi-googlehttpskwi-infographicukuxhuma kwangaphakathiamakhonkcoImikhombandlela yasekhayaukukhangela kwendawoImethadathaiselfowuni-kuqalaukusebenza kwiphephaUhlobo lwezinto eziphilayouphando lwezinto eziphilayoukufikelelaisantya sephephausetyenziso lwesantya sephephasimo sezintooonomadudwane abatyebileyoschemeiskimu.khusela iwebhusayithiSEOinfographicisakhiwo sokwakhaSSLamava
Ixesha Elidlulileyo, Elikhoyo, kunye neKamva le-Influencer Marketing Landscape
Ukuqonda iNtengiso yeNkqubo, iiNdlela zayo, kunye neeNkokheli ze-Ad Tech